Red Hat Enterprise Linux yeARM iri Pano | Linux Vakapindwa muropa
Isu takaona nhandare yeserura ichipfuura nhanho uko x86-yakavakirwa zvivakwa (zvese IA-32 uye AMD64) vakatonga neruoko rwakasimba. Asi mumakore achangopfuura ruokoNekuda kwekuita kwayo uye kushanda nesimba, pari iri kuvhurika mune nharembozha asiwo mumunda wema microservers kana madiki-mashoma ekushandisa maseva kune mamwe makambani asingade michina ine simba. Ndosaka vazhinji vanogadzira masisitimu ekuona vaona mukana wakanaka wekutanga vhezheni nerutsigiro rweARM rwemaitiro avo emaseva, sezvinoitika kuMicrosoft neWindows Server ...
Iye zvino zvakare hofori Red Hat inosangana iine simba rekushandisa, mune ino kesi yakavakirwa paLinux, kumhanya pane iyi mhando yeArM-based michina. Ndokunge, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) yatovepo kuARM, kunyanya iyo RHEL 7.4 vhezheni inouya nehukuru hwesoftware iyo mapakeji akagadziridzwa uye akasarudzika epuratifomu iyi uye neLinux 4.11 kernel, iri yazvino vhezheni ye iwo musimboti weTorvalds & Kambani.
Iyi distro saka yakagadzirirwa iyo SoC (Sisitimu pane Chip) zvichibva pa64-bit ARM ichaita maseva atiri kutaura nezvazvo. Ichi hachisi chitsva chakazara, isu tatoona kuwanda kwekugoverwa kwakadai seUbuntu, kuvhuraSUSE, nezvimwe, zvinoshanda zvakanaka nemaArm mavakirwo kana kunyangwe iyo Raspberry Pi pachayo, iyo sezvaunoziva inoenderana neARM futi. Asi chitsva apa ndechekuti iri server inoshanda sisitimu.
Uye ndedzipi idzi mhando dzemaseva dzinopa? Zvakanaka, kana tiine x86 machipisi tinotaura nezvekushandisa kwakatenderedza 90w kana kupfuura, kunyangwe chiri chokwadi kuti mashandiro avo akanyanya kwazvo. Asi kana isu tichiisa maseva paARM, izvo zvinoshandiswa zvinodzikira 10 - 45w, ndokuti, pakati pe9 ne2 nguva dzakaderera pane neIntel uye AMD machipisi. Nekudaro, mashandiro acho anotenderwa, haatombodzikire zvakapetwa ka9 pane iyo kesi yeX86 nekutenda kune yakanaka yekushandisa / performance reshiyo yavanayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Red Hat Enterprise Linux yeARM iri pano